Xiaomi M365 PRO လျှပ်စစ်စကူတာ (25km / h, 45km သို့အဝေး) ထံမှထံမှ ...
အစ » ထုတ်ကုန်များ » လျှပ်စစ် Scooter (365km / ဇနှင့် 25km မှအကွာအဝေး) မှတဆင့် Xiaomi က M45
အစလျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များလျှပ်စစ်ဆိုင်ကယ်, Scooterလျှပ်စစ် Scooter (365km / ဇနှင့် 25km မှအကွာအဝေး) မှတဆင့် Xiaomi က M45
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ် 2019 15 ဒီဇင်ဘာ 9: 23
ဂိုဒေါင် မှစ. စျေးနှုန်းသမိုင်းမူရင်း Xiaomi က Mijia လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို 45KM မိုင်အကွာအဝေးဗားရှင်းအီးယူဥရောပသမဂ္ဂသင်္ဘော
€ 438,51 - 2019 12 ဒီဇင်ဘာ
€ 563,80 - 2019 11 ဒီဇင်ဘာ
€ 438,51 - 2019 10 ဒီဇင်ဘာ
€ 474,31 - 20194ဒီဇင်ဘာ
€ 402,71 - 2019 29 နိုဝင်ဘာလ
€ 411,66 - 2019 28 နိုဝင်ဘာလ
€ 402,71 - 2019 20 နိုဝင်ဘာလ
€ 411,66 - 20194နိုဝင်ဘာလ
အမြင့်ဆုံးစျေးနှုန်း: € 580,81 - 20196မေလ
နိမ့်ဆုံးစျေးနှုန်း € 402,71 - 2019 20 နိုဝင်ဘာလ
ဂိုဒေါင် မှစ. မူရင်း Xiaomi က Mijia လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို 45KM မိုင်အကွာအဝေးဗားရှင်းအီးယူဥရောပသမဂ္ဂသင်္ဘော
Xiaomi ကလျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို 12.8Ah ဘက်ထရီမက် 45KM မိုင်အကွာအဝေး
မူရင်း Xiaomi က Mijia Pro ကိုစမတ်လျှပ်စစ်စကူတာ foldable hoverboard စကိတ်စီးဘုတ်အဖွဲ့ KickScooter Mini ကို ...
2019 နယူးမူရင်း Xiaomi က Mijia Pro ကိုစမတ်လျှပ်စစ်စကူတာ foldable hoverboard စကိတ်စီးဘုတ်အဖွဲ့ ...
မူရင်း Xiaomi က Mijia Pro ကိုစမတ်လျှပ်စစ်စကူတာ KickScooter Lightweight ဟော့ဗာဘုတ်အဖွဲ့ foldable ...
အမေရိကန် $ 549.99 21 2019% Xiaomi ကလျှပ်စစ်မော်တော် Scooter Pro ကို 300W3မြန်နှုန်း mode 25km / ဇမက်စ်။ မြန်နှုန်း 45km ...
2019 နယူး Xiaomi ကလျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို IP54 14.2kg Multi-function ကို Control Panel ထဲက 600W မက်စ်။ ပါဝါစ ...
မူရင်း Xiaomi က Mijia Pro ကိုလျှပ်စစ်စကူတာ 8.5 လက်မ E-Scooter
Xiaomi ကလျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကိုအီးယူ Plug
Xiaomi က foldable လျှပ်စစ်စကူတာဥရောပ 12.8Ah ဘက်ထရီ 45KM Overlong မိုင်အကွာအဝေးနှင့်အတူ Pro ကိုဗားရှင်း
Xiaomi က Mijia M365 ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာဥရောပဗားရှင်း IP54 12.5kg Ultralight 30km Long ကဘဝက ...
အီးယူဗားရှင်း Xiaomi က Mijia M365 Pro ကိုခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ 250W မော်တော်မြန်နှုန်း mode38.5 လက်မတုရုမြို့ ...
Xiaomi က Mijia M365 Pro ကိုခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ 300W မော်တော်မြန်နှုန်း mode38.5 လက်မတုရုမြို့ 45KM ...
အခမဲ့အခွန် 12.8Ah ဘက်ထရီ Xiaomi က Mijia ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို 300W မော်တော် max ကိုဝန် 100kg 8.5 ...
Xiaomi ကခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို3မြန်နှုန်း mode ကို 300W မော်တော် max ကို load100kg ELECTRICO Adulis patinete ...
Xiaomi ကလျှပ်စစ်မော်တော် Scooter Pro ကို 300W3မြန်နှုန်း mode 25km / ဇမက်စ်။ မိုင်အကွာအဝေး Range 45Ah 12.8km မြန်ဆန် ...
Xiaomi က Mijia ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို 300W မော်တော် max ကိုဝန် 100kg 8.5 လက်မတုရုမြို့မိုင်အကွာအဝေး 45KM ...
Xiaomi ကခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို3မြန်နှုန်း mode ကို 300W မော်တော် max ကိုဝန် 100kg 8.5 လက်မတုရုမြို့ 45KM ...
လျှပ်စစ် Scooter မှတဆင့် Xiaomi က M365 အကြောင်းသတင်းအချက်အလက်
အမည်: Xiaomi က Mijia လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို
အမျိုးအစား: လျှပ်စစ် Scooter
မြန်နှုန်း 25km / ဇ; 20km / ဇ; (ထိုအစု mode ကိုပေါ် မူတည်. ) 15km / h
ဝန်: 100kg (ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအလေးချိန်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးစီးနိုငျသညျ)
ဘရိတ်တပ်ဦး, E-ကို ABS, နောက်ဘက် disc ကို
အားသွင်းဗို့: 100 - 240V, 50 / 60Hz
အချိန်အားသွင်း: ~ 8-9 နာရီ
Xiaomi က Mijia လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကိုလှည့်ပတ်ရမယ့်ပျော်စရာ & လုံခြုံနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းသို့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအင်္ဂါရပ်များကျယ်ပြန့်အကွာအဝေးပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်တစ်ခုတည်းတာဝန်ခံအပေါ်ခရီးသွားလာ၏ 45km အထိပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါထိုးထွင်းသိမြင်ထိန်းချုပ်မှုရိုးရှင်းပြီးသင်ယူဖို့လွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, Taillight & ခေါင်းကိုအလင်းအိမ်အဆိုပါနေ့ညဉ့်မပြတ်နှစ်ဦးစလုံးစဉ်အတွင်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ braking ။ Xiaomi က Mijia Pro ကိုလျှပ်စစ်စကူတာအလွယ်တကူခေါက်3ရုံရိုးရှင်းသောခြေလှမ်းများထဲမှာသိမ်းထားတဲ့နှင့်နည်းတူအလွယ်တကူလှစ်ဟပြလိုက်နိုင်ပါသည်။
အလွန့်အလွန်မြန်နဲ့ Long-Range ဘက်ထရီ
တစ်ဦးက 300W မော်တာ 25km / ဇ၏ max ကိုမြန်နှုန်းမှ e-Scooter propels ။ အတိအကျအခြေအနေများအောက်တွင် 474km အထိအများဆုံးခရီးသွားအကွာအဝေးနှင့်အတူ 45Wh မြင့်မားတဲ့စွမ်းရည်ဘက်ထရီ။
အဆိုပါကြံ့ခိုင်ဘောင်အာကာသ-တန်းလူမီနီယံနဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 14.2kg အလေးချိန်။ အိတ်ဆောင်အိမ်မှာလွယ်ကူသောသိုလှောင်မှုအတွက်ခေါက်ဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်လက်သယ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်သော။
ရှေ့နှင့်နောက် 8.5 လက်မတာယာ
ရှေ့နှင့်နောက်တာယာကောင်းသောစျေးမှာစုပ်ယူမှုနှင့်လမ်း adapter နှင့်အတူ 8.5 လက်မအရွယ်ရော်ဘာရောနှောပစ္စည်းဖြစ်ကြသည်။
နှစ်ချက် Brake System ကို
တစ်ဦး disc ကို EABS ရုပ်ပျိုဘရိတ်ကာထိရောက်, တုံ့ပြန်မှုဘရိတ်များအတွက် Anti-သော့ခတ်ဘရိတ်စနစ်က Features ။
ယေဘုယျ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: Xiaomi က
အမျိုးအစား: ခေါက်လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို
specification အများဆုံးမြန်နှုန်း ECO: 15km / ဇ; : D: 20km / ဇ; S က 25km / h
ဘရိတ်: ဘရိတ် + ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအီလက်ထရောနစ်ဘရိတ်
တာယာ: 8.5 လက်မရှေ့နှင့်နောက် pneumatic တာယာ
controller undervoltage ကာကွယ်မှု: 29V 0.5V ±
controller လက်ရှိကန့်သတ်: 25V 0.5V ±
မော်တော်အမျိုးအစား: brushless ခန်းမအနိမ့်မြန်နှုန်း DC ကမော်တာ
သက်ဆိုင်အသက်အရွယ်: 16-50 နှစ်ရှိပြီ
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -10-40 °
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -20-45 °
အချိန်အားသွင်း: 8-9 နာရီ
အလေးချိန် & အရွယ်အစား ကုန်ပစ္စည်းအလေးချိန်: 14.2 ကီလိုဂရမ်
package အလေးချိန်: 20.0 ကီလိုဂရမ်
ကုန်ပစ္စည်းအရွယ်အစား: 108 x ကို 43 x ကို 114 စင်တီမီတာ
package Size: 115 x ကို 55 x ကို 20 စင်တီမီတာ
package မာတိကာ 1 မူရင်း Xiaomi ကလျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကို x
1 x ကိုပါဝါ Adapter က
1 x ကို Plug
1 nozzle ကိုတိုးချဲ့နေ X
1 x ကိုကို T-shaped လိမ်ဖဲ့ခြင်း
5 x ကိုဝက်အူ
Xiaomi က Mijia M365 လျှပ်စစ်စကူတာ Pro ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Xiaomi က M365 Pro ကို (2019) လျှပ်စစ် Scooter
Sobre el Nuevo Xiaomi က M365 PRO, offroad, ပြိုင်ကားအသေးစားမောင်းခြင်း, ပြဿနာများကို con M365 Tools များက y Movida Mas
လုပ်ဆောင်ခြင်း Xiaomi က Mijia လျှပ်စစ်စကူတာ M365 PRO 小米米家滑板车 Pro ကို开箱
လျှပ်စစ် Scooter (365km / ဇ, အ 25km မှအကွာအဝေး) ဗီဒီယိုများမှတဆင့် Xiaomi က M45
အဘို့အ6ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း လျှပ်စစ် Scooter (365km / ဇနှင့် 25km မှအကွာအဝေး) မှတဆင့် Xiaomi က M45
Evgeny - 2019 11 ဇွန်
Freego အီးယူ-06X လျှပ်စစ် Scooter (20km / ဇ, 20km ဖြင့်ဖုံးလွှမ်းအကွာအဝေး)